पार्टीभित्र विभेद र अन्याय छ, त्यसलाई हामीले चुनौती दियौँ ः प्रकाश ज्वाला – Nepalpostkhabar
पार्टीभित्र विभेद र अन्याय छ, त्यसलाई हामीले चुनौती दियौँ ः प्रकाश ज्वाला
नेपालपाष्ट खबर । ४ बैशाख २०७८, शनिबार ०९:१४ मा प्रकाशित
माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकारको विपक्षमा मत हाल्न तपाईंको दल एमालेले ह्विप जारी गरेको थियो, तर तपाईंहरूले ह्विप किन उल्लंघन गर्नुभयो ?
पार्टीभित्रको समस्या सबै प्रस्ट छ । हाम्रो पार्टीभित्र अन्याय छ, विभेद छ । जबर्जस्ती, एकलौटी, अर्को पक्षलाई पेल्ने तरिकाले जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हाम्रो चुनौती पनि हो । र, पार्टी नमिलाउँदा, पार्टीभित्रको समस्या व्यवस्थापन नगर्दा, पार्टीलाई एकताबद्ध नगर्दा पार्टीले क्षति व्यहोर्दोरहेछ भन्ने पाठ पनि नेतृत्वले सिकोस् र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न दबाब पुगोस् भन्ने हिसाबले अहिलेको निर्णय गरेका हौँ ।
यो कदम कर्णालीको मात्र हो कि राष्ट्रियस्तरको रणनीति पनि हो ?
राष्ट्रिय राजनीतिबाट कर्णाली अछुतो हुँदैन । हामीले केन्द्रसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेर निर्णय गरेका हौँ । हामीलाई कर्णालीमा पनि पेलान छ, एमाले नै नठान्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह पनि हो ।
‘फ्लोर क्रस’ गर्ने तपाईंहरूको पूर्वतयारी थियो कि अन्तिम समयमा आएर नीति परिवर्तन गर्नुभयो ?
पहिलेदेखि धेरै तयारी गर्नुपर्ने विषय नै थिएन नि  ? यसका पृष्ठभूमि आफैँ तयार भएका थिए । हामीले छलफल गर्‍यौँ, यो निष्कर्षमा पुग्यौँ । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्यौँ ।
कर्णालीमा जे भयो, केन्द्रीय राजनीतिलाई अब कस्तो मार्गदर्शन गर्छ ?
कर्णालीका सन्दर्भमा हामीले आफ्नो निर्णय लिएका हौँ । यो घटनालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कसरी लिनुहुन्छ, बाँकी त्यसमा भर पर्छ ।
तपाईं केन्द्रीय नेता भए पनि तीन वर्षदेखि प्रदेशमा हुनुहुन्थ्यो, एमालेका केन्द्रीय नेताहरूको दिशा निर्देशन के थियो ?
आवश्यक सरसल्लाह गरेकै हो ।
तपाईंहरू फेरि पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा के तयारी छ ?
त्यो विषयमा केही छलफल छैन । पदमा जाने विषय हाम्रो लागि ठूलो होइन, जनताले वामगठबन्धनलाई भोट दिएका थिए, त्यो भत्काइएको छ । फेरि मिलाउन सके हाम्रो पहल हुन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षाको विषय, एमालेलाई बलियो बनाउने नै हो ।
अब तपाईंहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने होला, प्रदेश सभा सदस्य पद पनि गुम्ने होला ? यो जोखिम पनि लिनुभयो, होइन ?
अहिले जोखिम लिएकै हो । हामीले मन्त्री पनि छाडिदिऊँ । त्यति मात्र होइन, सांसद पदबाट पनि हामीलाई कारबाही होला । राजनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन् । हामीलाई पदको चिन्ता छैन । उहाँहरूले कारबाही गरेर केही फरक पर्दैन, भोग्नका लागि तयार छौँ ।